Filazantsara fiainana 1
Misy ireo dingana tsy maintsy atao sy hita eo amin'ny fiainana
1/ Dingana tsy maintsy atao mba hidirana ny fanjakan'Andriamanitra
Marka 1:14-15 "Ary rehefa voasambotra Jaona, dia nankany Galilia Jesosy nitory ny filazantsaran’ Andriamanitra ka nanao hoe : Efa tonga ny fotoana, ka efa akaiky ny fanjakan’ Andriamanitra; mibebaha hianareo ka minoa ny filazantsara"
Hoy Jesosy Jaona 14:1 "Aza malahelo ny fonareo; minoa an’ Andriamanitra, ary minoa Ahy koa"
Anisan'ny nahatonga an'i Jaona niteny ny Fariseo sy ny Sadoseo, izy ireo dia misy mpivavaka fa rehefa nahita ny fitoriana ny filazantsara dia noheveriny fa tsy maintsy mandalo amin'ny batisan'ny fibebahana dia rehefa natao batisa dia voavonjy. Jaona amin'ny maha mpaminany azy dia mahalala tsara ny toetran'izy ireo mpivavaka mpiatsara velatsih sy ara-pomba hoy izy " mibebaha ianareo" miverena tanteraka amin'Andriamanitra ianareo ary avy eo ianareo mamoa voa mendrika ny fibebahana.
Matio 3:8 "Koa mamoazavoa miendrika ny fibebahana hianareo"
Raha tsy mamoa voa mendrika dia ny fitondran-tena, ny fomba sy ny fotom-pisainana teo aloha ihany no hita eo amin'ny fiainana, rehefa nibebaka dia misy fiovana hita eo amin'ny fiainana.
Raha tena tafita ao anatin'ny olona iray marina ny filazantsara dia tsy maintsy misy olona hanaraka anao, hiova koa, ny fitondran-tena no manamarina izany.
Tandremo fa indraindray ny ao an-tokantranontsika (zanaka, vady) aza tsy resy lahatra ny amin'ny fitondran-tenantsika nefa isika milaza ny antsika fa mpino.
Toy izany koa ireo mpiara-miasa amintsika. Izany no mahatonga antsika tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra.
Ohatra : "Nisy mpivady, ilay ramatoa mamonjy fotoam-bavaka ary nanomboka nanaraka azy taty aoriana mijaikojaiko sady niteny foana hoe "mba tsara ilay toriteny iny" farany dia nilaza fa manaraka ilay ramatoa mivavaka foana izy fa miafina azy" Izany no vokatrin'ny voa mendrika, mety tsy fantatrao fa misy manaraka ianao fa misy izany.
Mandresy lahatra ny tenin'Andriamanitra.
Ekeo Jesosy hanapaka, hitondra ny fiainanao sy ny hoavinao
Fibebahana : Fiverenana hankato ny Tenin'Andriamanitra izay hitondra ny fiainana (tsy manaraka antokom-pivavahana, fombafomba; ampy ahy ny eritreritro, ny fitondrako ny fiainako).
Inona ny Voa ?
Galatiana 5:22 "Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana",Hitan'ny olona ao an-tokantrano, mpiara- miasa izany.
Tandremo soa mbola mpivavaka sadasada.
Io voa io no tadiavin'Andriamanitra amintsika, raha ho avy ny Tompo. Indray mandeha Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra dia nisy aviavy tsy namoa, mbola niala nenina ny mpianatra hoe aleo ho karakaraina ilay aviavy, ho kapaina ilay aviavy afaka telo taona rehefa tsy mamoa
Lioka 13:7 "Ka dia hoy izy tamin’ ny mpamboatra ny tanimboaloboka; Indro, efa telo taona izay aho no tonga nitady voa tamin’ ity aviavy ity, fa tsy nahita; kapao io; nahoana io no manimba ny tany?"
Izany no hevitr'Andriamanitra, sao ianao manantena ny hivavaka foana ka tsy hitondra voa, vokatra ! Mba tsy ho tonga amintsika anie izany hoe ho kapaina !
Ny vokatra tadiavin'Andriamanitra
dia ny fitondran-tena, ny fo : Marka 7:21 "Fa avy ao anatin’ ny olona dia avy ao am-pony, no ivoahan’ ny sain-dratsy, dia ny fijangajangana, ny halatra, ny vonoan-olona, ny fakam-badin’ olona"
Miova toetra, toem-panahy tsy hoe ety ivelany fa ny ao anaty mihintsy, raha olona kizitina, mpiavonavona ...dia tonga olom-baovao izy.
Ny fibebahana marina dia fiatombohany firaisana amin'ny Fanahy Masina marina. Miditra ao anatitsika ny Fanahy Masin'Andriamanitra dia manome toetra vaovao.
Tsy mora ny hitsena ny Tompo eny amin'ny rahon'ny lanitra izany fa hisy "triage" izany !
Hebreo 12:14 "Miezaha mitady fihavanana amin’ ny olona rehetra ary fahamasinana; fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo "
Aza variana fotsiny hoe mpivavaka ! Ho avy tsy ho ela ny Tompo.
Aza manantena ahita ny Tompo raha mbola tsy nibebaka, tsy nateraka indray, tsy mbola niova fo.
Mila azo antoka ny mandrakizay.
Raha mbola ao anatin'ny tahotra foana ianao, ny fitebitebena foana, raha misy zavatra mitranga dia matahotra sao dia mbola eo ambaravaran'ny mandrakizay ianao fa tsy tafiditra ? misy dingana tokony ataonao? Mila manao toy ilay zanaka adala ianao.
Tsy lavina fa mety mandalo fotoan-tsarotra isika eo amin'ny fiainantsika fa manapaha-hevitra hiroso hiova fo, hanaiky an'i Jesosy ho tompon'ny fiainanao.
Aza zatra fotsiny mihaino tenin'Andriamanitra fa ampitoero anatinareo ny teny fikasan'Andriamanitra dia ho hitanareo no voninahitr'Andriamanitra.
2/ Dingana tsy maintsy atao mba andraisana ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiam-pahasoavana
Nomery 23:19 "Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak’ olombelona ka hanenina; moa efa nilaza va Izy, ka tsy hefainy? na efa niteny va Izy, ka tsy hotoviny?"
Misy fomba fijery vaovao tokony arahintsika, satria avadin'ny devoly io fomba fijery io amin'izao fotoana izao.
Nanomboka tao amin'ny testamenta taloha anisan'ny tena tadiavin'Andriamanitra
Maninona ianareo no asaina mamaky soratra masina sy baiboly?
Matetika dia mitady teny fampaherezana sy teny fikasana foana isika ao anatin'io fa tsy izany ihany
A/ Mijery ny fomba fiasan'Andriamanitra ao anaty baiboly?
Vakio ny 2 Petera 1
kolosiana1:10 "mba handehananareo miendrika ny Tompo, hanaovana ny sitrapony amin’ ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin’ ny asa tsara rehetra sady mitombo amin’ ny fahalalana tsaraan’ Andriamanitra"
a)- Ahoana ny fomban'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly manontolo rehefa miaraka amin'ny zanak'Israely Izy? Ahoana ny fomban'Andriamanitra rehefa mitaona ny olona Izy? miaraka amin'ny olona Izy? (fahalalana) ohatra naverin'Andriamanitra adiny 10 ny ora.
b)-Andriamanitra rehefa tena tia hamonjy ny olona sy hanafaka anao amin'ny zavatra manahirana dia zavatra kely no ampiasainy, ao anatin'ny zavatra kely no tian'Andriamanitra hanaovana zavatra ngezabe
- Matio 14:19 "Dia nasainy nipetraka teny ambonin’ ny ahitra ny vahoaka, ary noraisiny ny mofo dimysy ny hazandrano roa, dia niandrandra ny lanitra Izy ka nisaotra; ary nony efa novakiny ny mofo, dia natolony ny mpianatra, ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an’ ny vahoaka"
- 1 Mpanjaka 17:12 :"Fa hoy ravehivavy: Raha velona koa Jehovah Andriamanitrao, tsy manana mofo na dia iray akory aza aho, fa koba kely eran-tànan’ ila ao amin’ ny barika sy diloilo kely foana ao amin’ ny tavoara; ary, he! maka tapa-kazo roa aho izao, ka hiditra hanamboatra ireo hohaninay mianaka, dia ho faty izahay"
- Davida sy Goliata (1 Samoela 17)
- Ny nandresen' i Gideona ny Midiana (Mpitsara 6-7)
- Isaia 60:22 " Ny kely ho tonga arivo , ary ny malemy ho tonga firenena mahery; Izaho Jehovah no hanafaingana izany amin’ ny fotoany"
Vakio ny 2 Mpanjaka 4; Mpitsara 7; 1 Mpanjaka 17
Andriamanitra dia te hiasa eo amin'ny fiainanao, be dia be ny olona sahirana ara-pivelomana amin'izao fotoana izao hoy ny Tompo : inona àry no misy eo aminao androany?
Tanjona kendrena dia :
- Mitaona olona ho eo amin'i Jesosy (mamoa voa, misy olona manaraka anao)
- Manome voninahitra an' Andriamanitra
Ny kely tonga betsaka, midika izany fa manontany anao ny Tompo : "mahatoky Ahy ve ianao?", "manaiky ve ianao fa ny zavatra nolazaiko dia marina?", "manaiky ve ianao fa efa niteny Aho fa tsy maintsy tanterahiko?"
Tokony hiala ao anatin'ny sainao ny hoe "ity kely ity ve mba ho aiza, mba hahavitra inona!"
Fa hain'Andriamanitra ny mampitombo ny kely ho lehibe, indraindray isika manantena hoe raha tsy manambola be tsy afaka manompo an'Andriamanitra
Hoy ny Tompo hoe ny kely ho tonga be, tsy avy amin'ny herinao Efesiana 2:9 : "tsy avy amin’ ny asa, fandrao hisy hirehareha"
Diniho ahoana ny fomba fijerin'Andriamanitra ? Tsy misy zava-tsarotra Aminy. Tian'ny Tompo ianao hiditra ny fanjakan'Andriamanitra sy hahita ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra izay iantrehanao fotoan-tsarotra.
Vavaka :"Tompo ô ! atolotro ho Anao ny misy eto amiko, Amen!"